Security ( Female ) (M&AS) | MPRL E&P Group of Companies
Security ( Female ) (M&AS)
နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ၊ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီး၊ နိုင်ငံတကာနှင့်ဆက်သွယ် လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရုံးခန်းများတည်ရှိရာ(၁၈)ထပ် အဆောက်အဦးဖြစ်သည့် Vantage Tower တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအလိုရှိသည်။
အမျိုးသမီး လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း (၀၁) ဦး
•	အသက် ( ၂၀ - ၃၅ ) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။
•	၁၀ တန်းအောင်မြင်သူဖြစ်ရမည်။ (ဘွဲ့ရရှိသူဦးစားပေးမည်။)
•	ဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ပါက လစာနှင့် ခံစားခွင့်များပိုမိုကောင်းမွန်ပါမည်။
•	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်၍ ရုပ်ရည်ပြေပြစ်မှုရှိရမည်။
•	ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် အရပ်အမောင်း ကောင်းသူများ ဦးစားပေးမည်။
•	အထက်အကြီးအကဲမှ ပေးအပ်သော လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
•	အဖွဲ့အစည်းဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
•	မိမိကြိုးစားမှုအပေါ်မူတည်၍ ခံစားခွင့်နှင့် အခွင့်အလမ်းတိုးမြင့်မှုများ ရရှိနိုင်ပါသည်။
•	လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ပေါ်မူတည်၍ လုပ်ငန်းတာဝန်အဆင့်ဆင့် တိုးမြှင့်ရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းရှိသည်
Uniform, Lunch & Transportation Allowance.
Security For Construction Site National Energy Group Company (NGEC) Security And Safety Expert METRO Wholesale Myanmar Ltd Port Facility Security Officer Ayer Shwe Wah Co.,Ltd. Senior IT Security Officer MyWorld Careers Co., Ltd. Driver (Urgent) Green Myanmar Construction Co.ltd Guard (Male) (M&AS) MPRL E&P Group of Companies Driver(အိမ်စီးကား) Moon Sun Co.,Ltd ( Construction & Trading ) Driver (Female) Haven Co., Ltd Driver (ကားသေး) Shwe Byain Phyu Co.,Ltd Assistant Sales Manager (Magway) Myanmar Distribution Group Co., Ltd.(MDG) Python - Odoo Developer Global Connect Asia Customer Service Officer Myanmar Information Technology Pte. Ltd. (MIT)